Spain: Labo diyaaradood oo si la yaab leh ku kala badbaaday – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Labo diyaaradood oo ah nuuca rakaabka ayaa si diriq ah ku kala badbaaday xilli midi taagneyd, mid kalana dooneysay iney ku degto garoonka diyaaradaha Barcelona ee dalka Spain.
Duuliye u dhashay Raashiya oo kaxeynayey diyaarad rakaab ah oo nuuceedu ahaa Boeing 767, ayana leedahay shirkadda diyaaradaha UTair ayaa sabtidii lasoo dhaafay ee 5-tii July baajiyey in diyaradiisu gorodda geliso oo ku dhacdo diyaarad kale oo rakaab ah, taasoo laga leeyahay dalka Arjantiin.
Duuliyaha reer Raashiya oo soo raariciyey diyaaraddiisa si uu u caga dhigto garoonka diyaaradaha Barcelona ayaa indhaha saaray diyaarad ay leedahay Arjantiin oo ah nuuca Airbus 340, taasoo dhex gurguuraneysa garoonka.
Duuliyaha ayaa durba cirka ula kacay diyaaradiisa, si uu uga badbaado inuu ku dhco diyaaradda garoonka dhex socotay, wuxuuna galay wareeg kale si uu isugu diyaariyo inuu mar kale soo degjiyo diyaaradda.
Warbaahinta ayaa shirkad lagu magacaabo Aena oo maamusha garoomada diyaaradah Spain kazoo xigtay in arrinta nuucaan ah caadi ka tahay dunida duulimaadyada.